सिमेण्टको ब्राण्ड भ्यालूको मापदण्ड तोकिएको छैन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सिमेण्टको ब्राण्ड भ्यालूको मापदण्ड तोकिएको छैन
अन्तरवार्ता 100 views
सिमेण्टको ब्राण्ड भ्यालूको मापदण्ड तोकिएको छैन
सिमेण्ट उत्पादनको क्षेत्रमा गोयनका सिमेण्ट प्रालिले आफ्नो स्थान फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । उद्योगले हाल पीपीसी, ओपीसी र पीएससी सिमेण्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले सिमेण्टको मुख्य कच्चापदार्थ (क्लिङ्कर) आयात गर्छ । रूपन्देहीको भैरहवा, बरसौलीस्थित यस उद्योगले अत्याधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षणपश्चात् आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँछ । नेपालमा सिमेण्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, समस्या, सम्भावनालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मदन लामिछानेले उद्योगका महाप्रबन्धक उमेश बरालसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा हाल सिमेण्टको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा निर्माणले गति लिएकोले माग राम्रो छ । अहिले करीब ४७ ओटा सिमेण्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यी उद्योगका १ सय ५० भन्दा धेरै ब्राण्ड बजारमा आएका छन् । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ५ लाख घरमध्ये हाल २० प्रतिशत मात्र बनेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १ हजारभन्दा बढी पुल बनाउनुपर्ने छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हुलाकी मार्ग, फाष्ट ट्र्याक, पुल–पुलेसालगायत निर्माणले गति लिएमा सिमेण्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको खपत बढ्छ । अहिलेको बजेटमा स्याटेलाइट सिटी, मेगा सिटी, नयाँ शहर बसाउने लगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । यसले निर्माण सामग्रीको बजार बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि थुप्रै भौतिक संरचना निर्माणको आवश्यकता छ । साथै, अब स्थानीय विकास निर्माणले तीव्रता पाउने हुनाले निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । अहिले वार्षिक करीब १२/१३ करोड बोरा सिमेण्ट खपत भइरहेको छ । आगामी ५ वर्षमा यस्तो खपत दोब्बर बढ्छ ।
गोयनका सिमेण्टको विशेषता के हो ?
सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरी उच्च गुणस्तरीय सिमेण्ट उपभोक्तामाझ उपलब्ध गराउनु गोयनका सिमेण्टको प्रमुख विशेषता हो । हामी उद्योगको आफ्नै अत्याधुनिक ल्याबबाट सिमेण्टको गुणस्तर परीक्षण गर्छाैैं । यसले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गरिसकेको छ । ७ वर्षदेखि सिमेण्टको उत्पादन गर्दै आएका छौं । हाल पोजोलाना पोर्टल्याण्ड सिमेण्ट (पीपीसी), अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेण्ट (ओपीसी) र पोर्टल्याण्ड स्लाग सिमेण्ट (पीएससी) गरी तीन थरी उत्पादन गर्दै आएका छौं । गोयनका सिमेण्ट ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्टमा आधारित क्लोज सर्किट मिलबाट उत्पादन हुन्छ । पीएससी विश्वमै वातावरणमैत्री सिमेण्टको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ । गुणस्तर विभागले ओपीसी सिमेण्टमा ३३ ग्रेडसम्मको अनुमति मात्रै दिए पनि हाम्रो सिमेण्टमा २८ दिनको सेटिङ सममयमा ४३ गे्रडसम्मको स्ट्रेन्थ आउँछ । कम्पनीले १२ हजार बोरा सिमेण्ट प्रतिदिन उत्पादन गरी छ ।
नेपाल गुणस्तर विभागले ४३ र ५३ ग्रेडको अनुमति दिन नसक्दा के समस्या परको छ ?
नेपाली सिमेण्टको गुणस्तर अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भए पनि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ४३ र ५३ गे्रडको प्रमाणपत्र दिन शुरू गरेको छैन । सरकारले यो प्रक्रिया तत्काल शुरू गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । यसका लागि सिमेण्ट उत्पादक सङ्घले सम्बन्धित निकायमा छलफल गरी दबाब दिइरहेको छ । गुणस्तर विभागले यस्तो ग्रेडिङ गर्न उपकरण तथा पूर्वाधार नभएकोले तत्काल गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । तर, सरकारले यसका लागि पहल भने गरिरहेको छ । कुनै ठूला परियोजनालाई ४३ ग्रेडको सिमेण्ट चाहिए कुनै एउटा लटको उत्पादन ४३ ग्रेडको मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेर सर्टिफाई गराउन भने सक्छौं । तर, सरकारी नीति नियम नबनेकोले यसलाई सहज रूपमा बजारमा विक्री गर्न पाइँदैन ।
बजारमा सिमेण्टको मूल्यमा एकरूपता हुन नसक्नुको कारण के होला ?
सिमेण्टको ब्राण्ड भ्यालू कति राख्न पाउने भन्ने तोकिएको छैन । पछिल्लो समय भैरहवा क्षेत्रमा सिमेण्टको मूल्य धेरै बढ्यो भन्ने समाचार आए । यो समाचार आएपछि सरकारको अनुगमन गर्ने निकायले सडकमा सिमेण्ट ढुवानीका लागि हिँडेका ट्रक पक्रेर बिल जाँच ग¥यो । तर, सरकारले हामीभन्दा महँगो रकममा विक्री गर्ने धेरै कम्पनी छोडेर उचित मूल्यमा विक्री गर्ने उद्योगलाई दुःख दियो । बिल काट्ने बेला राजस्वको कपी पनि सँगै दिइएको हुन्छ । त्यसैले, आकस्मिक रूपमा पक्रनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यस्तै, हामी हरेक महीना विक्रीको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइरहेका छौं । सरकार त्यहाँबाट पनि राजस्व छल्ने र मूल्य बढाउनेलाई पक्रन सक्छ । अहिले एकैखाले ओपीसीको मूल्यमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँसम्म फरक छ । यस्तो फरक किन हुन्छ ? १ सय रुपैयाँ बढी राख्नुको कारण उसको ब्राण्ड भ्यालू, थप सुविधा दिएको वा कुनै स्किम ल्याएको कारण होइन भने त्यस्तो हुनु जरुरी छैन । एउटै खाले सिमेण्टमा ब्राण्ड भ्यालूको कारण २५ रुपैयाँसम्म बढी हुनु स्वाभाविकै भए पनि १ सय रुपैयाँ त राख्न नहुने हो ।
सिमेण्टका लागि कच्चापदार्थको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
सिमेण्टका लागि मुख्य कच्चापदार्थ (क्लिङ्कर) स्वदेशी तथा भारतीय उद्योगबाट आपूर्ति गरिरहेका छौं । हामी भारतका प्रख्यात सिमेण्ट कारखानाबाट कच्चापदार्थ ल्याउँछौं । हामीलाई महीनामा १८ हजार टनसम्म क्लिङ्कर चाहिन्छ । त्यसैले, स्वदेशी क्लिङ्करले मात्र हाम्रो माग धान्न सक्दैन ।
वातावरणमैत्री उत्पादनका लागि के गर्नुभएको छ ?
गोयनका सिमेण्ट ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्टमा आधारित क्लोज सर्किट मिलबाट उत्पादन हुन्छ । यो प्रविधिमार्फत सिमेण्ट उत्पादन गर्दा धूँवाबाट निस्कने कार्बन पानीमा छानिएर मात्र वायुमण्डलमा जान्छ । यसरी छान्दा वातावरण प्रदूषक कण पानीमै रहन्छन् । हामीले वातावरणमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छौं ।
सिमेण्ट उद्योगका समस्या के के छन् ?
हाम्रो उद्योग लुम्बिनी औद्योगिक कोरिडोरमा छ । वातावरण प्रदूषण गराएको भनेर सरकारीस्तरबाट उद्योग विस्थापनको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कामदार र क्लिङ्कर आपूर्तिमा पनि समस्या छ । भर्खरै वीरगञ्ज नाकाबाट र्‍याक क्लिङ्कर आयातमा रोक लगाइएपछि भैरहवा तथा विराटनगर नाकामा चाप परेको छ । भैरहवामा वीरगञ्जमा जस्तो नाकासम्म रेल आउँदैन । ट्रकबाट ढुवानी गर्दा ढिलाइ हुन्छ । यसका लागि उद्योगले कच्चापदार्थ स्टोर क्षमता बढाउनुपर्ने तथा यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा लेमिनेटेड बोरा बनाउने थोरै उद्योग छन् । भारतबाट ल्याउँदा महँगो पर्छ । अहिले भैरहवा भन्सारमा ड्राइपोर्ट छैन । सामान राख्ने स्टोर तथा क्रेनको सहज उपलब्धता पनि छैन । उद्योगका समस्या सम्बन्धित प्रदेशबाटै समाधान गर्ने भन्ने समाचारले उत्साहित छौं ।
सिमेण्टको बजार प्रवर्द्धन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
नेपालभर गोयनका सिमेण्टको विक्रीवितरण हुँदै आएको छ । हाम्रो सिमेण्ट विक्रीका लागि देशभर करीब ४ सय आउटलेट छन् । बजारमा गोयनका सिमेण्टको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । यो वर्ष केही ठूला सिमेण्ट उद्योगले पनि उत्पादन शुरू गर्न लागेकोले हामीले आफ्नो उत्पादनको प्रचारप्रसार तीव्र पारेका छौं । कम्पनीले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय प्रडक्ट दिएकोले यसको जानकारी आम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदै छौं ।
सिमेण्टको प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले केमा ध्यान दिनुपर्छ ?
सिमेण्ट उत्पादक कम्पनीको बारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । घर बनाउन प्रयोग गरिने सिमेण्टको गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ । भित्ता तथा ढलानका लागि प्रयोग गरिने सिमेण्टबारे इञ्जिनीयरसँग सल्लाह लिनुपर्छ । सिमेण्टमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री, जस्तै– बाुलवा, गिट्टी, पानी आदिको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजारमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी उपलब्ध छन् । सिमेण्ट प्रयोगको २८ दिनमा ९० प्रतिशत स्ट्रेन्थ आउँछ । बाँकी १० प्रतिशत आउन ५ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले, निर्मित संरचनामा १ हप्तासम्म पानी हाल्न छाडनु हुँदैन । मौसम हेरेर त्यसमा चिसोपना बनाइराख्नु पर्छ । ओपीसी फाष्ट सेटिङ सिमेण्ट हो । यसमा ९४ प्रतिशत क्लिङ्कर हालिन्छ । ओपीसी सिमेण्ट विशेषगरी ढलान, हाइड्रोपावर, समुद्र र पानी नजीकका चिसो हुने ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ । पीएससी स्लाग मिसाएर बनाइन्छ । छिटो सेट हुनु नपर्ने तथा चिसोको मात्रा कम भएको ठाउँमा पीपीसी र पीएससीको प्रयोग गरिन्छ ।
सिमेण्टको ब्लक टेष्ट गर्न सकिन्छ । अर्को उपाय चारओटा इँटा राखेर एम १५, एम २०, एम २५ कुन मसलाको भाग बनाउने हो, बनाएर इटाँमा राखेर सेटिङ गर्नुपर्छ । यसरी सेटिङ गरेको मसला ३/४ घण्टामै जमेको पाइए सिमेण्ट गुणस्तरीय भएको मानिन्छ । नेपालमा सिमेण्टको उत्पादन शुरू भएको ३० वर्ष भयो । त्यसैले, कमसल सिमेण्टको प्रयोगबाट हुने समस्या शुरू हुनै बाँकी छ । समस्या त ५० वर्ष पुगेपछि शुरू हुन्छ । त्यसैले, सिमेण्टको स्ट्रेन्थ टेष्ट गरेर गुणस्तरीय उत्पादनलाई अहिलेबाटै जोड दिनुपर्छ । कमसल सिमेण्ट उत्पादन गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ ।
अहिले ठूला क्षमताका सिमेण्ट उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्रिरहेकोले सबै उद्योग टिक्छन् र चलिराख्छन् भन्ने छैन । अब हामी पनि भारतबाट क्लिङ्कर ल्याएर सिमेण्ट उत्पादन गरेर टिक्न गाह्रो हुन्छ । राम्रो मार्जिन भएका बेला समस्या थिएन । अब मार्जिन घट्न थालेपछि बैङ्कको ब्याजले धान्दैन । साथै, बैङ्कले पनि क्लिङ्कर बेस उद्योग छैन भने ऋण पनि सहज रूपमा दिँदैनन् । त्यसैले, अबको केही वर्षभित्र आफै क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । त्यसका लागि अहिले योजनाको काम भइरहेको छ ।
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:५६